Sida loo Edit MKV Faylal ay la MKV Editor for Mac / Win (Windows 10 oo ay taageerayaan)
> Resource > Video > Sida loo Edit MKV Video Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
MKV yahay waa qaab dabacsan file la mid ah AVI iyo MPEG, laakiin caan baxay isticmaalo HD videos. Waxa ay taageertaa dhawr nooc oo ah maqal iyo video codecs iyo guulaha kor u caan bulshada taageere-subbing Isladooda (halkaas oo dadka isticmaala subtitles abuuro). Iyadoo files MKV la huleeshay karaa iyada oo ciyaartoyda warbaahinta qaarkood iyo uploaded in Qalabka telefoonada gacanta, warbaahinta MKV aan la saxar karo by caanka ah software video tafatir sida Windows Kan sameeyey Movie, iMovie, Adobe jilitaankii, Final Cut Pro. Nasiib wanaag, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa sida qalab video tafatirka in aad u saamaxaaya in ay Iyadoo edit MKV video in ay saamayn aad u jeclaystay. Akhri si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Qaybta 1aad: Sida loo Edit MKV File
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit MKV File
Easy in la isticmaalo MKV Editor:
Waqtiga muuqda kuu oggolaanayaa in aad wax ka bedel waqti kasta iyo meel kasta;
Edit MKV videos leh classic sida goo, dalagga, cut, kala, isku shaandheyn, iwm .;
Shakhsiyeeyo MKV video la PIP (sawir-in-sawir), filtarrada, kala guurka, Intro & credits;
In la siiyo qalabka tafatirka sare sida Shift Janjeeri, Toos Off, Muuse, bood yaree ee Beats, iwm
La wadaag videos saxar on YouTube, Facebook ku saabsan barnaamijka ama u shidin DVD.
Maxaad Dooro Wondershare MKV Editor
Tani editor MKV video qoreysa interface ogaado oo taas oo ka dhigaysa deegaanka tafatirka fudud loo heli karo qof kasta.
Soo diyaariyeen A baaxad qalabka video tafatirka waxaa la siiyaa. Waxaad si fudud noola, isku shaandheyn, kala, jaray, isu geeyo MKV videos aad ku qasabno yar.
Ku dar iyo astaysto qoraalka, filter, PIP (sawir sawirka), farshaxanka graphic, Intro / credit iyo kala guurka si ay u sameeyaan MKV videos aad qurux badan.
Si toos ah geliyaan inay YouTube ama Facebook, badbaadin inuu ciyaaro PSP, iPod, iPhone ama 3GP telefoonka gacanta iyo gubi in DVD- aad dooratay oo dhan!
Sidee si fudud Edit MKV Video:
1. Ma qaar ka mid ah tafatirka aasaasiga ah
By double files MKV gujinaya Timeline ah, waxaad samayn kartaa qaar ka mid ah video tafatirka aasaasiga ah, sida miraha beeraha, isku shaandheyn, oo wuxuu qotomiyey video duwan, saturation iyo dhalaalka, si degdeg ah / mooshin gaabis ah oo dheeraad ah.
2. Ku dar goobta guurka iyo saamaynta
Waa fikrad fiican in aad ku darto kala guurka qaar ka mid ah si ay u wanaagsan-raadinta in la beddelo mid ka mid clip in kale. In sidaa la yeelo, guji "guurka" tab iyo jiidi kala guurka aad jeceshahay in clips ah wadada. Waxaa jira 48-guurka ee goobta doorashada si aad u kala guurka ee u dhexeeya video clips ka badan habboonaanta for.
Kala guurka sokow, aad si fudud ku dari kartaa qoraalka, Intro / credits, filtarrada iyo saamaynta dhawaaqa in tabs kala duwan ku xusan jadwalka.
3. Codso tafatirka sare
Waxa kale oo aad ku dari kartaa saamaynta more qabow si MKV videos aad. Si tan loo sameeyo, xaq guji video iyo dooro "Power Tool" doorasho ka menu, ama kaliya ku dhacay on "Power Tool" icon taas oo kor ku xusan Jadwalka ka. Markaasaa suuqa kala Power Tool arbushin doonaa in aad. In daaqadan, waxaad dooran kartaa in aad ku darto saamaynta qabow sida Janjeeri-Shift, Muuse, Toos ama Jump Iska yaree ee Beats in video ah.
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit MKV File (Video Tutorial)